Adan Gebi iyo Macnaha Dib-u-heshiisiin Dhab ah: “Bariiska Xamar aad Dadka ku Siinaysaan ka Daaya oo Magta naga Bixiya” – Radio Daljir
Adan Gebi iyo Macnaha Dib-u-heshiisiin Dhab ah: “Bariiska Xamar aad Dadka ku Siinaysaan ka Daaya oo Magta naga Bixiya”
Juunyo 16, 2017 4:41 g 1
Muqdisho waxaa weli ka soconaya shir loogu magacdaray shirka dib-u-heshiisiinta Soomaalida kaas oo ay ka qaybgalayaan maamulada dalka ka jira. Shirka waxaa soo qabanqaabisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dawladda Federaalka Soomaaliya.
Shirka oo la yiri waa mid lagu heshiisiinayo dadka Soomaaliyeed ee wax kala tabanaya, ayaa hadana la wada ogyahay in ay ugu darantahay “kala-tabashada qabaa’iladu” oo dhiig badanna uu si joogto ah ugu dhex daato, waxa ay isku hayaanna ay tahay magta dad la kala dilay.
Qabaa’iladaas is haya waxaa ka mid ah kuwa Waqooyiga Galgaduud, waxaana Radio Daljir xaalka Galgaduud uga waramay Aadan Cabdinuur Galaal “Aadan Gebi” oo ah Gudoomiyaha Degmada Dhabbad ee Waqooyiga Galgaduud.
Adan Gebi wuxuu yiri, “bariiska Xamar aad dadka ku siinaysaan ka daaya oo magta naga bixiya ama nala bixiya, oo bariiska anagaa ku filan!”
Waa kan Adan Gebi, waraysiga oo dhammaystirana mar dhow naga fisha.
Martisoor iyo Axmed Sh. Maxamed Tallman: Marxuum Barkhad Cali Saalax AUN
abdullahi Ali Aden 2 years
waa runtii bariiskaasi waxba ee xaqiiqada jirta si dhab ah haloo wajaho